Ultrasonic Water Meter, China Ultrasonic Water Meter Manufacturers, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Home>Mpanome vokatra>Metering Gauge
Ny metatra rano ultrasonic dia novolavolaina mifototra amin'ny fitsipiky ny fandrefesana ultrasonic ny fomba fahasamihafan'ny hafainganam-pandeha. Ny fitaovana dia mampiditra fandrefesana, kajy ary fampisehoana miaraka, ary mampiasa teknolojia fanjifana herinaratra micro. 1 sela ny batterie dia azo ampiasaina mandritra ny 6 taona mahery, ary afaka mahatsapa ny fandrefesana marina ny 0.01m³ / h. Izy io dia manana ny asan'ny fanitsiana sy fanamafisana ny fikorianan'ny rano ho an'ny sahan-drano voarefy, izay tsy manelingelina ny fikorianan'ny ripple sy ny fikorontanana ao amin'ny sahan'ny rano, ka mahatonga ny fandrefesana ho marina sy azo antoka kokoa; Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana dia manana ny toetran'ny boky kely, ny fahamarinan-toerana tsara ary ny fahaizana manohitra ny fitsabahana matanjaka.
Ny endri-javatra amin'ny antsipiriany momba ny metatra rano ultrasonic:
1. Ny teknolojia fandrefesana ny fikorianan'ny ultrasonika dia raisina mba hahatsapana ny fametrahana zoro maro, ary tsy misy fiantraikany amin'ny fandrefesana ny fitaovana, ary mihena ny fahaverezan'ny tsindry;
2. Ultrasonic rano metatra sodina rafitra dia tsy misy mekanika mihetsiketsika faritra, tsy misy mekanika fitafy, maha tsara ny fampiasana maharitra;
3. Ny fantsona dia vita amin'ny varahina ara-tontolo iainana, ny fametahana mena ary ny fametahana mazava tsara ny CNC;
4. Rehefa foana ny pipeline na ny ranon-javatra dia static mandritra ny fotoana maharitra, dia afaka miditra amin'ny mandeha ho azy hery famonjena asa;
5. Miaraka amin'ny chip fitehirizana angon-drakitra E2PROM, dia afaka mitahiry angon-drakitra momba ny tantara mandritra ny 8 volana;
6. Fitahirizana angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy: Tokony hotehirizina tsindraindray ny angon-drakitra toy ny taham-pidirana sy ny hafainganam-pandeha.
7. Miaraka amin'ny fiasan'ny valva fanadiovana ny fahadisoana mandeha ho azy, ny fampahatsiahivana efa ela, ny fanakatonana ny valva efa ela, dia afaka miantoka ny tahan'ny famatsiana rano, ary ny rafitra fitantanana dia mety ho fanaraha-maso lavitra;
8. Ny circuit sampling signal natao manokana dia miantoka fa ny famantarana dia tsy hivadika amin'ny toe-javatra samihafa, ka miantoka ny mari-pamantarana fandrefesana marina sy azo antoka.
Generator AC Synchronous telo-dingana